सरकारी हस्तक्षेपको विरोधमा अष्ट्रेलियाका दैनिक पत्रिकाले समाचारको ठाउँमा कालो पोते | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more सरकारी हस्तक्षेपको विरोधमा अष्ट्रेलियाका दैनिक पत्रिकाले समाचारको ठाउँमा कालो पोते
कात्तिक ४ गते, २०७६ - १२:३६
एजेन्सी । सरकारी हस्तक्षेपको विरोधमा अष्ट्रेलियाका सञ्चारमाध्यम तथा सञ्चारकर्मी आन्दोलित भएका छन् । सोमबार अष्ट्रेलियाका मुख्य दैनिक पत्रिकाले पहिलो पेजमा समाचारको साटो कालो पोतेर विरोध जनाए । द अष्ट्रेलियन, द सिड्नी मर्निङ्ग हेराल्ड र अष्ट्रेलियन फाइनेंशियल रिव्युले समेत आफ्नो पत्रिकामा कालो पोतेर विरोध जनाएका छन् ।
सरकारी हस्तक्षेपको विरोधमा अष्ट्रेलियन टिभि च्यानलहरुले पनि आफ्नो विज्ञापनको ठाउँमा सरकारको भूमिका बारे जनतालाई प्रश्न गरिरहेका छन् । च्यानलहरुले विज्ञापनमार्फत जनतालाई सरकारले सच्चाई लुकाईरहेको बताएका छन् ।
किन सरकारको विरोध भयो ?
हालै अष्ट्रेलियाको एक अदालतले यौन शोषण गरेको आरोपमा दोषी पाईएका कार्डिनल (पादरी) जार्ज पेलको बारेमा सञ्चारमाध्यममा समाचार छाप्न रोकिदियो । जसको विरोधस्वरुप अष्ट्रेलियन मिडियाले पेलको नाम विना नै उनी दोषी ठहरिएको समाचार सार्वजनिक गरे । त्यससमय विदेशी सञ्चारमाध्यमले कार्डिनलको पुरा नामसहित समाचार छापेका थिए ।
त्यसको केहि दिनपश्चात नै प्रहरीले अष्ट्रेलियन ब्रोडकास्टिंग कोरपोरेशन (एबीसी) मिडिया गु्रपका सम्पादकको घरमा छापा मारेको थियो । उनलाई राष्ट्रिय महत्वको गोप्य सूचना राखेको आरोप लगाइएको छ । एबीसीका सम्पादकमाथि सरकारले गरेको व्यवहारको विरोध स्वरुप सञ्चार संस्थाहरु एकजुट भई अहिले आन्दोलित भएका हुन् ।
के छ सञ्चार संस्थाको माग ?
अष्ट्रेलियाका सञ्चार संस्थाहरुको भनाई छ, पत्रकारहरुको काम जनतालाई सहि सूचना दिने हो । यस्तोमा सरकारले पत्रकारलाई संवेदनशील जानकारी जुटाउन असहयोग गरिरहेको छ । सञ्चारसंस्था पत्रकारमाथि अंकुश लगाउने कानून परिवर्तनको माग गर्दछन् ।
पत्रकारको विरुद्ध सजिलोसँग मानहानीको मुद्दा दर्ता गर्ने अधिकार हुन नहुने सञ्चार संस्थाको माग छ । टिभि च्यानल नाईनका अध्यक्ष ह्यूज माक्र्स, हरेक नागरिकले सरकारको प्रत्येक फैसलाबारे जानकारी पाउनुपर्ने माग गर्दछन् ।
कात्तिक ४ गते, २०७६ - १२:३६ मा प्रकाशित